YURUB "CIIDAMO" WAXAY LA SOCON DOONAAN WEERAR LAGU QAADO CIMILADA CAALAMIGA AH - MAQAALLO
Yurub "ciidamo" waxay la socon doonaan weerar lagu qaado cimilada caalamiga ah
16 dawladaha yurub waxay go'aansadeen in ay ku biiraan ciidamada waxayna ku istaagaan wareysiga ka horjeeda kulaylka caalamiga ah: deganayaashu kama bixi karaan dhibaatada abaarta xagaaga iyo dababka waaweyn.
Hoggaamiyeyaasha wadamada yurub ayaa waxay ku dhawaaqeen rabitaankooda ah inay midoobaan "wajiga caalamiga ah" iyada oo qayb ka ah olole ballaaran oo lagu ballaarinayo dadaallada caalamiga ah si wax looga qabto dhibaatada kululaynta.
Gaar ahaan, madaxweynayaasha Cyprus iyo Sweden ayaa tilmaamaya burburkii cimilada xagaaga ee dalalka Yurub (dabkii ugu xoogga badnaa ee Giriigga, abaarta iyo wax soo saarka Talyaaniga iwm) oo ah "culeyska ugu muhiimsan ee waqtigeena".
"Qiyaasta heerkulka ayaa si weyn uga soo horjeeda asalka qaddiyaddan oo la duubay ka hor intaan la horumarin kobcinta warshadaha caalamiga ah," hoggaamiyayaasha yurub ayaa sidaas leh. "Sidoo kale, sida aan cid kale jirin, waxay soo mareen isbeddelladan bilaha xagaaga ee 2018ka." Madaxwaynaha Austrian Van der Belen wuxuu ku qanacsan yahay in kulaylka caalamiga ahi uu halis ugu jiro dhibaatooyinka halista ah ee adduunkoo dhan iyo xasiloonida dhulalkooda shisheeye. Hogaamiyaha Australiya wuxuu ku qanacsan yahay in bini'aadamku u baahan yahay in ay midoobaan dadaal loogu talagalay fayoqabka casriga iyo jiilalka mustaqbalka: "Waa in aan iska caabinno isbeddelka cimilada, ama helno siyaabo aad ugu dabooli kartid xaaladaha qumman ee kululaynta caalamiga ah!"
Laga bilaabo 2 ilaa 14 Disembar dalka Poland waxaa la qaban doonaa shirar lagu xallinayo arrimaha isbedelka cimilada. Ujeedada ugu muhiimsan ee kulankani waa in lagu heshiiyo shuruudaha Heshiiska Cimilada ee Paris iyo in la go'aamiyo tallaabooyinka xiga ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka kululaynta caalamka.